Ukuqashelwa - Mytika Speak
Ikhaya / Izinkondlo / Ukuqashelwa
Ubuso bulokhu buguquka,
njengoba ngangimbuka ngokwesaba.
Ungasho nini ukuthi "yeka", nge
Ngaleso sikhathi ngambona,
inhliziyo yami yeqa isinyathelo esikhulu.
kulokhu kuphila, wayengakaze ahlangane.
Izinyembezi zaqala ukusakazeka,
njengoba ngangazi okokuqala.
Ngize lapha ukuzothola
into engilahlekile, emsulwa neyiqiniso.
Amagama ngihlale nginawo
ukunakekelwa, vala ngaphakathi kwenhliziyo yami.
Amathegiukuqaphela ukukhula komuntu siqu izinkondlo ukuqashelwa ingokomoya Amalangabi Amabili